DANAB: “Cidna kama fiigin Shabaabkii soo weeraray Ballidoogle!” (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Wararka DANAB: “Cidna kama fiigin Shabaabkii soo weeraray Ballidoogle!” (Dhegeyso)
DANAB: “Cidna kama fiigin Shabaabkii soo weeraray Ballidoogle!” (Dhegeyso)
(Ballidoogle) 02 Okt 2019 – DF Somalia ayaa horay u sheegtay in ay laayeen tiro badan oo ka tirsan ururka Al-Shabab oo lagu dilay weerarkii dorraad lagu qaaday saldhiggii Ciidanka Cirka Somalia ee Ballidoogle.
Haddaba, Taliyaha Danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeni-qaar oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay inaan waxba ka badbaadin maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka kusoo qaaday Ballidoogle. Taliyaha ma uusan sheegin tiro sugan.
Taliyaha Danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeni-qaar ayaa sida ay wax u dhaceen uga warramay Haaruun Macruuf.
Previous articleSAWIRRO: Shirka caalamiga ah ee Muqdisho oo maalintiisii 2-aad galay & dalalka kasoo qayb galay (Xaaf oo kasoo muuqday)
Next articleRA’YI: Waxaa jirta hal arrin oo muhim ah oo uu ka ilduufsan yahay maamulka Puntland!